Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba Ezintsha zaseHong Kong » Vakashela eHong Kong ukuze uvikelwe yiDancing Jellyfish
Uhambo lokuzijabulisa • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha zaseHong Kong • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
Njengendawo yokuqala yedolobha elisenkabeni yedolobha laseHong Kong, iCube O Discovery Park ayigcini nje ngokwethula umhlaba ongaphansi kwamanzi nempilo yasolwandle ngendlela entsha, kodwa futhi ibamba ulwandle ngobukhulu ngokulinganisela esikalini se-cubic esiletha ulwandle eduze bese luxhuma izivakashi zemvelo ngezindlela ezintsha nezijabulisayo.
Ukumboza indawo engaphezulu kwamamitha ayi-10,000 XNUMX, iCube O Discovery Park izofaka inhlanganisela yeziboniso zangempela zasolwandle kanye nemidlalo ejabulisayo yokusebenzisana yama-multimedia, kanye nezinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa, ezemfundo nezokudlela.
Ilungele ukuvakashelwa komndeni kanye nokuthunyelwe kwezithombe zokuxhumana, iCube O itholakala enxanxatheleni yezitolo iPlaza 88 eTsuen Wan futhi iyindawo yokuqala yokuhlangenwe nakho kwasolwandle enkabeni yedolobha.
ICube O yiphrojekthi yokuqala eHong Kong evela eCube Oceanarium - uphawu lomhlaba oludumile lwe-aquarium - futhi ingumphumela wokubambisana okuphumelelayo phakathi komakhi omkhulu we-aquarium, ithimba elisebenza ngokuqeqeshelwa ukufuya izilwane zasolwandle, umxhumanisi omkhulu wokongiwa kolwandle kanye nomxhumanisi wezobuchwepheshe unqobe Imiklomelo emibili ye-Best Visual Effects kuma-Hong Kong Film Awards.
Lapho uvakasha i-Hong Kong futhi ngemuva kokuvula kabusha, iCube O kufanele ibe kuhlu lwakho lwamabhakede
Umqondo we-Cube O ukwakha isipiliyoni esiyingqayizivele sasolwandle esifaka umhlaba ongaphansi kwamanzi nempilo yasolwandle yangempela, kuhlanganiswe nemiphumela yokusebenzisana ye-multimedia, ukukhuthaza umyalezo wokuvikelwa kolwandle
Okuhlangenwe nakho kwasolwandle kwawo wonke umndeni
ICube O ihlukaniswe yaba yizindawo ezinetimu ezinokuheha okuhlukile kufaka phakathi ukuboniswa kwewindi lokuqala laseHong Kong. Lokhu kuhlanganisa ukubukwa kwempilo yangempela yasolwandle nemiphumela ekhanyisiwe yesithunzi nemithunzi. Isibonelo, i-jellyfish ikhonjiswa ku-kaleidoscope yemibala, kanti i-Virtual Reality (VR) ithatha izivakashi ohambweni olwandle olujulile.
Kukhona negumbi lokufundela le-jellyfish iMixed Reality (MR), indlu yokudlala yezingane, nendawo yokudlela. Lokhu okuhlangenwe nakho okuthokozisayo kunikeza usuku oluhle oluqondiswe emndenini, kanye nendawo ekahle ye-Instagrammable yabantu abasha.
Ngokuhlanganisa impilo yangempela yasolwandle nemiphumela ekhanyayo yobuciko nemithunzi eguqula i-jellyfish ecacile ibe ngumbukiso webhola, uCube O uthemba ukujabulisa abantu ngobukhosi bolwandle. Ama-jellyfish adansayo abukeka sengathi asebenza nge-ballet yasolwandle engaphansi kolwandle futhi enza amathuba ezithombe angajwayelekile ezivakashi.
Ubuchwepheshe obuxhumanisayo be-multimedia buzokwenza futhi izivakashi zikwazi ukubuka impilo yasolwandle eduze futhi zifunde kabanzi ngemvelo, ukuvikelwa kwemvelo, kanye nezindlela zokuphila ezizinzile. Imiphumela yokubuka emnandi izodala umuzwa wokuthuthwa uyiswe olwandle olugcwele imibono emangalisayo.
I-kaleidoscope yezikhala ezingapheli zezinganekwane
I-jellyfish kaleidoscope ngobuhlakani ihlanganisa izithombe ze-jellyfish yangempela, nezibuko zesithunzi sesibuko, kuyilapho izibani ezimibalabala zibonisa izithunzi ezingenakubalwa ze-jellyfish kuzo zonke izinhlangothi. Lokhu kudala isikhala esingaqondakali neze lapho izivakashi zizozwa sengathi zigxile ngokuphelele.
Ngemuva kwalokho, izivakashi zingavakashela isikhungo sokucwaninga se-jellyfish futhi zifunde ukuthi i-jellyfish ikhula kanjani isuka ezinganeni iye kubantu abadala futhi ithole kabanzi nge-jellyfish ecology kanye nezimpawu zezinhlobo ezahlukahlukene ze-jellyfish. Ngaphezu kokubuka ukudla kwe-jellyfish, izivakashi nazo zizovunyelwa ukuthintana nazo zisuka ebangeni elingaphephile futhi ngaleyo ndlela zisondele olwandle.
Imidlalo ehlangene yemidiya exubile izothuthukisa ulwazi lonke, njengoba izivakashi zingaba “yizinhlanzi” ezincane, zibhukuda ngaphansi kokuvikelwa kwe-jellyfish ohambweni lokuhlola olwandle. "Inhlanzi encane" kufanele icashe ngaphansi kwe-jellyfish ngenkathi ixwayiswa ngokubanjwa yizintambo noma ukuhlaselwa yizilwane ezizingelayo ezicashe eduze.
Ekilasini le-MR jellyfish, izivakashi zingaba "abagadi basolwandle" futhi zitakule ufudu lwasolwandle oluhlaza oludangele, oludinga ukuphathwa ngokucophelela nomzamo omkhulu wokusiza ufudu lubuye lubhukude lubuyele olwandle.
Umsebenzi wokutakula ulandela izinqubo zangempela zokutakula ufudu. Izivakashi ezibamba iqhaza zizokwazi ukufunda ngomsebenzi wabalondolozi bemvelo abangochwepheshe, bacabange ngomphumela wabantu olwandle, futhi bathole umuzwa wokuthunywa maqondana nokongiwa kolwandle.
Umndeni onezihloko zasolwandle indlu yokudlala nokudla kwezinkanyezi ezinhlanu
I-Playhouse yezingane inesikhala sokuqala sokudlala sasolwandle saseHong Kong lapho izingane zingathola khona ulwazi lwasolwandle ngenkathi zijabulisa ngokuqonda izinselelo zomzimba.
Izindonga zePlayhouse zidwetshiwe ngopende olungele izingane ukudala indawo ehlanzekile nenempilo, ngakho-ke abazali bangadla ukudla okuphekiwe okuseduze nokuthula kwengqondo.
Ipaki imeme uMpheki oyiNtloko nethimba lakhe ehhotela lezinkanyezi ezinhlanu lendawo ukuzolungiselela izibiliboco ezikhethwa ngamanzi. Ngaphezu kwalokho, iCorner Cone, uhlobo oludumile lwe-ayisikhilimu wase-Asia, ilungiselele uhla lwama-ayisikhilimu anolimi olulinganiselwe ikakhulukazi i-Cube O. Ama-ayisikhilimu amise ngokuhlukile ahlinzeka ngamathuba wesithombe sabezindaba senhlalo ikakhulukazi.
ICube O ihlose ukugqugquzela abantu abaningi ukuthi bahloniphe futhi bavikele abakhileyo olwandle futhi bazibandakanye nokongiwa kwezasolwandle, ngokujabulela nokubabaza ukubukwa okuhle ngempilo yasolwandle, ukubuka izici zabo, nokungena ngokwengqondo ezweni elingaphansi kwamanzi ngokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokuxhumana imidlalo.
Kube O yakhelwe ukuba yindawo yokuzilibazisa, ukuphumula, nemfundo yabantu kanye nemindeni, kanye namaqembu ezikole angathola ukwehluka kwempilo olwandle ngokusebenzisa ama-adventures acwilisayo
Ku-2021, lalibhalwe njenge-5th i-aquarium ehamba phambili emhlabeni yiwebhusayithi yeWorld Cities Ranking futhi ibekwe ku-16th ekukhetheni kwama-aquariums angama-50 ahamba phambili yiwebhusayithi yeTour Scanner.
INdlovukazi ihlubula ihlazo iNkosana u-Andrew yazo zonke iziqu zempi phakathi kwehlazo locansi January 13, 2022